IMambazo inqamule uhambo ngoMshengu
UJoseph Shabalala namadodana akhe oThami, Thulani, Msizi noSbongiseni abayingxenye yeqembu iLadysmith Black Mambazo okuphoqe ukuthi inqamule uhambo lwaphesheya kwezilwandle ngemuva kokuvela kwezindaba zokudlula kukayise emhlabeni izolo ekuseni Isithombe: Motshwari Mofokeng/ANA
NOKUBONGWA PHENYANE | February 12, 2020
LINQAMULE uhambo iqembu iLadysmith Black Mambazo ngemuva kokushona komsunguli walo uJoseph Shabalala (78).
UMshengu ushone izolo esibhedlela sasePitoli, i-Eugene Marais Hospital, ngemuva kokugula isikhathi eside.
UMshengu waqala ukuxinwa ukugula okungaqondakali emuva kokuthatha umhlalaphansi eqenjini ngo-2014.
Isolezwe ngeSonto emasontweni amabili adlule libike ukuthi le nkakha emculweni wesicathamiya ixinekile njengoba yasuswa ekhaya eMnambithi igula kabi yaphuthunyiswa esibhedlela ePitoli.
Okhulumela iLadysmith Black Mambazo, uXolani Majozi, uthe: “Ngesikhathi edlula emhlabeni ubenaye uMama uThoko (unkosikazi kaMshengu) kodwa manje basendleleni ebuyela ekhaya. IMambazo ibinohambo e-USA kodwa manje simatasa ukuthi babuye njengoba bengeke besakwazi ukuqhubeka nohambo. Ngeke kuze kubuye amadodana akhe kuphela kodwa iqembu lonke liyabuya yize uhambo lwabo bekumele luphele ngoMashi 24.”
Uthe umndeni ubuzohlangana izolo ntambama ukuze kuhlanganiswe amakhanda ngezinhlelo ezithinta ukufihlwa kukaMshengu.
“Konke sokumemezela ekuhambeni kwesonto njengoba ngibheke eMnambithi nje ngenzela ukuba seduzane nomndeni,” kuqhuba uXolani.
Ilungu leMambazo * -Albert Mazibuko (71) eselibe kuleli qembu iminyaka engu-51, embikweni we-Iol enguzakwabo weSolezwe izolo, liveze ukuthi wonke amalungu eqembu akhathazekile kakhulu emuva kokuzwa izindaba zokudlula emhlabeni kukaMshengu.
“Besiqeda ukucula sisendleleni ebuyela eLos Angeles sisuka eSan Diego ngesikhathi sithola izindaba zokudlula emhlabeni kukaJoseph Shabalala. Ngagcina ukumbona ezinyangeni eziyisithupha. Ngesikhathi sibonana asikhulumanga ngalutho olutheni, sacula nje isikhathi esiningi njengoba ilokhu ebesihlala sikwenza futhi ubejabule kakhulu,” kuchaza uMazibuko.
Uqhube wathi kuningi akufunde kuMshengu kodwa okubaluleke kakhulu ukusebenza kanzima.
Ube esebonga abantu bakuleli ngokubanika imiyalezo yenduduzo kulesi sikhathi esinzima.
Owayengumphathi womsakazo uKhozi FM, uBhodloza Nzimande, uthe wamtshela uMshengu ukuthi umculo wesicathamiya uzowuthatha awubeke kwelinye izinga.
“Wayengaziboni ebeka lo mculo lapho ukhona manje kodwa ngamtshela ukuthi ingoma ethi Emaweni Webaba izobabeka kude nangempela kwaba njalo,” kuchaza uBhodloza.